Home EGO AFRICAN FOOTBALL Lassina Traore Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Lassina Traore Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata, akụkọ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ dịrị, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na-ewetara gị akụkọ ndụ dị mkpirikpi Akụkọ banyere Onye na - egwu bọọlụ bidoro site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka agụụ gụchaa gị, lelee nchịkọta Lassina Traore's Bio na foto. O doro anya na ọ na-akọ akụkọ banyere njem ndụ ya.
Nke mbu, anyi enweghi ike ileghara mmuo ojoo nke Lassina Traore gosiputara na Ajax si 13-0 trashing nke VVV Venlo.
Ọzọkwa, mgbe ị gbasịrị ihe mgbaru ọsọ ise na egwuregwu ahụ, onye ọ bụla enweghị ike ịjụ ma onye bụ Ọhụrụ George Weah nwere ike ịbụ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị kọọrọ gị akụkọ ya.
Akụkọ Lassina Traore nke Childhoodmụaka:
Maka ihe na-ebido na biografia, ndị bọọlụ gbara ogologo aha; Lassina Chamste Soudine Franck Traore.
A mụrụ ya na ụbọchị 12 nke Jenụwarị 2001 nye ndị nne na nna egwuregwu na Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Lassina bụ nwa nwoke nke ụmụ atọ amụrụ site na mmekọrịta dị n'etiti nna ya na nne ya.
Dịka ọ bụ omenala na mba Africa ụfọdụ, Lassina tolitere soro ụmụaka ndị ọzọ na-egwu bọọlụ n'okporo ámá.
N'oge ahụ, ọ na-eso nne ya mgbe ụfọdụ, onye bụ ọkachamara na-egwu egwuregwu, na-agba bọl. N'ebe ahụ, ọ na-ele ndị egwuregwu nwere ọgụgụ isi ka ha jiri bọọlụ mee ụdị aghụghọ niile.
Ikekwe nwatakịrị ahụ tụlere ịbanye n'egwuregwu football ka ọ na-ele mama ya na-egwu egwu. N'agbanyeghị ndabere nke mkpebi ya, ejiri m n'aka na ọ naghị akwa ụta maka ịhọrọ egwuregwu ahụ karịa ọrụ ọ bụla ọzọ.
Ezigbo ezinụlọ Lassina Traore:
O kwesịghị iju anyị anya ịhụ ka nwa okorobịa Burkinabe na-eme ihe ngosi mara mma na pitch. Na mbu, Lassina sitere na ezinụlọ nwere ezigbo ndekọ egwu na football.
Moreso, nna ya, nne ya na nwanne nna ya bụ ndị egwuregwu bọọlụ. N'ihi ya, anyị nwere ike ịchọpụta na nkà dị elu nke ịkwa egwuregwu gafere ya. Ka a sịkwa ihe mere Lassina ji nwee ike igosi egwuregwu ịgba bọọlụ na-enweghị atụ ya na klọb ọkachamara mbụ ya, Ajax.
Isi ezinụlọ Lassina Traore:
Ọ bụ ezie na ọ na-egwuri egwu n'otu n'ime egwuregwu ndị ama ama na Europe, ihe ngosi ọdịnihu ga-echeta mgbọrọgwụ ya. N'ezie, akpụkpọ ojii ya bụ ihe akaebe na-enweghị mgbagha nke na-egosi ịme nna nna ya Africa.
… Obodo Lassina, Bobo-Dioulasso bụ obodo nke abụọ kacha buo ibu na Burkina Faso. Obodo ahụ na-asụ Jula dị ka lingua-franca n'okporo ámá ha mgbe asụsụ obodo ha (French).
Lassina Traore Mmụta na Ọzụzụ Buildup:
Site n'oge ruo n'oge, onye amụrụ na Africa amakarịrị bọọlụ. Laa azụ n'oge ọ bụ nwata, Traore na-agwụcha dị ka onye kachasị nweta ọtụtụ asọmpi mpaghara.
Ekele nwanne nna ya, Rahim Ouedraogo, onye hibere otu egwuregwu bọọlụ ọhụrụ na 2012, Lassina nwere ike iburu talent ya n'ọkwa ọzọ.
Ka ọ na-erule oge Lassina Traore kụrụ elekere 11, ọ sonyeere agụmakwụkwọ nwanne nna ya, Rahimo FC. N'ebe ọzụzụ ọhụrụ ahụ, onye na-eto eto na-eto eto zutere ụmụaka ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi karịa ka ọ tụtụrụla.
Lassina Traore Ndụ Ndụ Ndụ:
Site na nkwado nke ndị mụrụ ya, Lassina jiri afọ ise sochirinụ nke ndụ ya na-emepe emepe nka na Rahimo agụmakwụkwọ. Ka ọ na-erule oge onye ọkpụkpọ Burkinabe kụrụ elekere 16, ọ banyere njem 8000km gaa South Africa wee sonye na Ajax Cape Town FC.
N'agbanyeghị na ọ dị obere, talent Lassina na klọb ọhụrụ ya gosipụtara n'eziokwu na ọ bụ ezigbo onye ọkpụkpọ.
N'ịghọta otú e si chọọ nkwupụta ya nke ọma na otu ndị otu mba, onye nchịkwa Burkina Faso kpọtara nwata ahụ dị afọ iri na isii ka o sonye na egwuregwu enyi megide Benin na 16th ụbọchị nke May 4.
Lassina Traore Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mara ihe?… Nwa okorobịa ahụ meriri ihe mgbaru ọsọ atọ maka Stallions nke Burkina Faso na mbụ ya abụọ mba okpu. Omume ya dị ịtụnanya dọọrọ mmasị nke Ajax.
O di nwute na, Traore buru oke ibu ma choo ka o felata tupu ya abanye na klọb. N'ihi ya, Ajax zipụrụ onye nchịkwa iji kwadebe ya maka ahụmahụ na-agbanwe ndụ na football football.
Mgbe Lassina mechara meziwanye ahụ ya, e nyere ya ọzụzụ nke yiri ka ọ bụ ọnwụnwa na Ajax. N'oge ahụ, ọ ghaghị ịlụ ọgụ Matthijs de Ligt, onye mere ule ya ezigbo ihe ịma aka. Mgbe emechara, ọ bịanyere aka na Ajax na afọ atọ na ọkara na 4th nke Jenụwarị 2019.
Lassina Traore Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Mgbe ọ bịarutere Netherlands, ọ na-egwuri egwu maka Jong Ajax ma merie ihe mgbaru ọsọ 21 na 31.
N'ikpeazụ, ọ sonyeere ndị mbụ na Ajax ma nyere ha aka inweta ọtụtụ onyinye. N’ezie, ịrụ ọrụ Lassina bụ ihe ịtụnanya, na ọrụ ọganiihu ya mere ka obi mama ya na ụmụnne ya nwanyị nwee ọ .ụ.
Ngwa ngwa ngwa n'oge edere Bio a, Lassina Traore ghọrọ onye ọkpụkpọ Ajax mbụ mgbe Marco van Basten na 1985 iji ruo goolu ise na Dutch Championship. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Lassina Traore Girlfriend?
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ na ahụ ike ya nwere ike, n'ezie, na-adọta ọtụtụ n'ime ụmụ nwanyị nwanyị ya.
Agbanyeghị, Lassina Traore ezerela ikpughe onye ọ bụ enyi ya nwanyị ma ọ bụ onye ọ ga-achọ ịlụ mgbe ọ bụla isiokwu a pụtara.
Ka o sina dị, mba Burkinabe nyere nlezianya anya iji hụ na ọ kachasị n'akụkụ niile nke ndụ ya (nke gụnyere ndụ mmekọrịta ya). Obi sie gị ike, Lassina Traore Family ga-eji ọ joyụ kwado ya mgbe oge ruru ka ọ lụọ nwunye ya.
Lassina Traore Ndụ Nke Onwe:
Onye ama ama ama ama nke Africa anaghi echefu ihe nketa ya. Mgbe ụfọdụ, n'oge ememe ahụ, Lassina na-eyikarị uwe ndị obodo (caftan), ihe ngosi nke na-egosi na ọ maara nke ọma mgbọrọgwụ Ezinụlọ ya.
Obi abụọ adịghị ya, agụụ siri ike Lassina nwere maka ịme ihe mgbaru ọsọ nwere ike igosi ya dị ka onye na-arụ ọrụ na pitch. Otú ọ dị, o gosipụtara àgwà ndị ọzọ dị ka inwe mmetụta dị nro, nke na-adịgide adịgide na nke ezi uche, nke gosipụtara na ihe niile ọ na-egosipụta n'ọhịa bụ naanị njirimara nke àgwà zodiac Capricorn ya.
Ndụ Lassina Traore:
N’agbanyeghi oke ego etinyegoro n’egwuregwu, ụfọdụ ndị egwuregwu ebiela ndụ dị ala. N'otu aka ahụ, Lassina Traore ebiela ezigbo ndụ n'agbanyeghị agbanyeghị ego ọ na-enweta na Ajax.
Ọ dị ka Traore nwere ụlọ, nwekwaa ike ịnwe ụgbọ ala, ma ọ bụ karịa. N’oge agbachi COVID-19, o ji nrubeisi wetuo obi n’ụlọ ya wee gbaa mmadụ niile ume ka ha mee otu ihe ahụ.
Lassina Traore Net thtọ:
O weere ndị na-agba ọsọ n'Africa na-aga nke ọma dịka Andre Onana ịrụsi ọrụ ike iji kpata akụnụba.
N'otu aka ahụ, Lassina ga-agbarịrị mbọ ma na-enyere Ajax aka iji meziwanye ego ya wee bulie Net Worth ya. Anyị ji akụ ya kpọrọ ihe na-erughị otu nde Euro n'oge ọ na-ede akwụkwọ ndụ ya.
Lassina Traore Ndụ Ezinụlọ:
Ikekwe ị maghị, onyinye kasịnụ nke meworo ka ịdị adị ya dị mkpa bụ nkà a na-enwe n'egwuregwu football. Moreso, n'ihi na ndị mụrụ ya bụcha ndị egwuregwu nwere nka, Traore kwenyesiri ike na football na-agba ọsọ ya. N'akụkụ a, anyị ga-ekpughere Eziokwu banyere ezinụlọ Traore, bido na nna ya.
Banyere Lassina Traore Nna:
Nke mbu, Bio bu ihe agha gha adighi ezu oke na-ekwughi aha nna ya. O doro anya na nna Lasinna Traore bụkwa onye egwuregwu bọọlụ pụtara ìhè. Agbanyeghị, onye na-awakpo ahụ ekwupụtawo na ya anaghị ele ya anya na-egwu egwu.
Ikekwe, ọ ga-abụrịrị na nna ya anwụọla nna ya mgbe ọ dị obere. Ọfọn, anyị enweghị ike ikwu eziokwu nke ahụmịhe ezinụlọ ya na nwoke ọ kpọrọ 'Papa'.
Banyere Lassina Traore nne:
Nwere ike iche ụdị ọ thatụ jupụtara obi mama ya mgbe ọ ghọtara na nwa nwoke ọ mụrụ naanị ya ketara ogo ya na football. N'ezie, nne Traore bụ onye isi ndị otu mba Burkina Faso n'oge ọ na-arụ ọrụ, ihe ngosi nke na-egosi ya dịka nwanyị ọkpụkpọ nwere ọgụgụ isi.
Dị ka Lassina Traore si kwuo, nne ya nwere nkà karịa nna ya. N'ihi ya, ọ kwenyere na ikike ịgba chaa chaa sitere na ya. Ka a sịkwa ihe mere na ọ na-ele ya anya dị ka ezigbo nọmba 10, nke a gọziri site na nnukwu okike na nka ọrụ aka.
Banyere ụmụ nwanyị Lassina Traore:
Site n'oge ruo n'oge, onye ahụ na-awakpo ahụ na-asọpụrụ ụmụnne ya nwanyị mgbe niile. Nnyocha na-egosi na Lassina Traore nwere ụmụnne nwanyị abụọ nwere ike ịbụ nne nke ụmụaka a gosipụtara n'okpuru.
Ọ gaara amagbu onwe ya ma ọ bụrụ na o nwere nwanne nwoke nwere ike igwu egwu dika o si egwu. Onye ma, ha nwere ike ịbụ ngwakọta zuru oke maka otu mba ha.
Banyere ndị Lassina Traore ikwu:
N'ụzọ na-akpali mmasị, nwa nwanne nna ya (Bertrand Traore) emekwarala onwe ya aha na ọdụ ụgbọ elu Europe. Obi abụọ adịghị ya, ezinụlọ Traore nwere obi ụtọ maka mmezu nke Lassina na nwa nwanne nna ya nke na-egwu Aston Villa n'oge edere Life Life.
Ndị otu nyocha anyị ka na-agba mbọ ịkọwa aha nna nna ya na nne nne ya. Ọ bụ ezie na ndị nwanne mama ya na ndị ikwu ya abịabeghị ịmata ya na soshal midia, ọchichọ kacha mma ha na ya nọ mgbe niile.
Eziokwu Lassina Traore:
N'ịbụ onye mere ka ị mara banyere Ezinụlọ ahụ na-eti ihe, anyị na-ewetarakwu eziokwu banyere akụkọ ndụ ya nke ga - enyere gị aka ịmatakwu banyere akụkọ ndụ ya.
Eziokwu nke 1: Ọ na-enweta ọtụtụ nde mgbe ị hụrụ ya West African CFA franc:
Obi abụọ adịghị ya, ụgwọ ọrụ mmalite ya dị ka ọkachamara- n'agbanyeghị na ọ dị obere pụtara ọtụtụ ihe maka ndị Burkinafaso, West Africa.
Eziokwu bu, webe Lassina Traore ezinụlọ si, nkezi nwa amaala akwụ gburugburu 509 Euro otu ọnwa. N'ezie, ha kwesịrị ịrụ ọrụ maka ọnwa 34 Afọ 2.8) ime ihe Lasinna nakọtara n'otu ọnwa n'oge ọ malitere Ajax.
Kwa Afọ € 208,320
kwa ọnwa € 17,360
Kwa Izu € 4000
Kwa .bọchị € 571
Kwa elekere € 23
Kwa Nkeji € 0.4
Kwa nke abụọ € 0.007
Anyị emeela atụmatụ nke ọma gbasara ego Lassina Traore na-enweta ka elekere na-akụ. Chọpụta n'onwe gị ego ole ọ kpatara kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Lassina Traore's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu nke 2: FIFA profaịlụ:
Na-ekpe ikpe site na stats ya, ọnụ ahịa ahịa nke onye na-eti ihe arịgoola na nchịkọta ego nke € 2.9 nde n'oge ịde Bio. N'ihi nghọta ebumnuche ya, Traore esonyela n'etiti 50 kacha mma na-atụ bọl na 2020.
Eziokwu nke 3: Okpukpe Lassina Traore:
Onye a na-asọpụrụ na-asọpụrụ otu okwukwe ahụ Edouard Mendy - Alakụba. Iji were nganga gosipụta onwe ya dị ka onye alakụba, Lassina Traore gara na peeji Instagram ya ka o bipụta otu foto ya, nke nwere ihe odide ndị Alakụba.
Ofwa nke bọọlụ na-agbanwe nwayọ nwayọ ka ọtụtụ ndị na-eto eto na-enwetakwu ohere ịgba egwu na klọb ha. N'otu aka ahụ, anyị 2020 ọhụrụ Ajax prodigy azakwala ọkpụkpọ oku nke ọgbọ egwuregwu bọọlụ ebe ndị na-eto eto na-enwe mmetụta.
Na ederede a, ezinụlọ ya dum (ọkachasị nne mama Traore) na-ekpe ekpere oge niile ka ya mee nke ọma na ọrụ ya. Anyị na-atụ anya ọdịnihu ebe Lassina Traore Life Story ga-etinye ahịrịokwu ahụ; "Onye na-awakpo ihe kacha mma na Europe".
Daalụ maka ịgụ Ihe Odide A nke Ndụ Iconic Burkinabe. Kedụ ihe bụ ebumnuche gị na ihe Traore rụzuru rue ugbu a? Jiri obiọma hapụ azịza gị na ngalaba nkọwa anyị n'okpuru.
Aha n'uju: Lassina Chamste Soudine Franck Traore
Aha Nick: Lassina Traore
Ụbọchị ọmụmụ: 12th January 2001
Ebe amụrụ onye: Bobo Dioulasso, Burkina Faso
Rygwọ ọnwa kwa afọ £ 208,320
elu: 1.83 m (ụkwụ 6)